पेट्रोल र डिजलको भाउ पनि यसरी आकाशियो ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/पेट्रोल र डिजलको भाउ पनि यसरी आकाशियो !
नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको भाउ प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाएको छ । भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट भाउ बढेर आएका कारण नेपालमा मूल्य समायोजन गरिएको आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिएका छन् ।
अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १ सय ९ रुपैयाँ र मट्टितेल र डिजलको मूल्य प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ पुगेको छ । एलपी ग्यास र हवाइ इन्धनको मूल्य भने बढाइएको छैन ।
आजदेखि सुरुभयो आन्तरिक हवाई उडान, विमानस्थलमा बढ्यो चहलपहल
सुनको मूल्य घट्यो, हेर्नुहोस् आजको बजार भाउ
तराईका जिल्लामा शीतलहर, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले निकाल्यो विशेष बुलेटिन
बढ्दैछ कोरोनाको त्रास : १२ जिल्लामा निषेधाज्ञा, विभिन्न क्षेत्र सील